Akụkọ - Otu esi edozi akwa mmiri ozuzo
Otu esi edozi akwa mmiri ozuzo
1. Teepu mmiri ozuzo
Ọ bụrụ na akwa mmiri ozuzo gị bụ akwa mmiri na-adọrọ adọrọ, ị kwesịrị itinye akwa ndị ahụ ejirila ebe dị jụụ na ikuku ozugbo i jiri ha mee ihe, ma kpoo akwa mmiri ahụ. Ọ bụrụ na e nwere unyi n’elu uko mmiri ozuzo gị, i nwere ike itinye akwa mmiri ozuzo gị na tebụl dị larịị, ma jiri nwayọọ hichaa ahịhịa dị nro tinye n’ime mmiri dị ọcha iji sachapụ unyi n’elu ya. Cheta akwa ekpuchidoro agbachapụ agbachapụ A pụghị iji aka kpochaa ya, ma ya fọdụzie ikpughere ya n'anyanwụ, a gaghị akpọ ya ọkụ, a pụghị iji ncha nke alkaline hichaa ya. Ebumnuche nke a bụ iji zere ịka nká nke mmiri ozuzo. Ma ọ bụ bụrụ ihe na-emebi emebi.
Enweghi ike itinye teepu mmiri ozuzo na mmanụ, a ga-akwakọba ya mgbe ị na-echekwa ya. Etinyela ihe dị arọ na akwa mmiri ozuzo, etinyekwala ya na ihe dị ọkụ iji gbochie ya ịpị na akwa mmiri. Agbo, ma ọ bụ mgbawa. Tinye ụfọdụ mothballs n'ime igbe nke akwa mmiri ozuzo a na-emechi emechi iji gbochie mmiri ozuzo ahụ ịrapagidesi ike.
2. Uwe mmiri ozuzo na-ekpuchi mmiri ozuzo
Ọ bụrụ na akwa mmiri ozuzo gị bụ akwa mmiri ozuzo, mgbe mmiri mmiri ozuzo na-ezo mmiri mmiri ozuzo, ịnweghị ike iji aka gị ma ọ bụ okpu ajị anụ wee wulite mmiri ozuzo na akwa mmiri ahụ, n'ihi na ịme nke a nwere ike imebi arụmọrụ mmiri nke eriri ndị ahụ na akwa mmiri.
Uwe mmiri ozuzo adịghị mma maka ịsa ahụ ugboro ugboro. Ọ bụrụ na ị na-asacha ya ugboro ugboro, ọ ga-abụ na arụmọrụ mmiri nke mmiri ozuzo ga-ebelata. Ọ bụrụ n ’ị chere na akwa mmiri ozuzo gị dị oke unyi, ị ga-eji nwayọ jiri mmiri dị ọcha hichaa akwa mmiri ahụ, wee kpoo akwa mmiri ahụ a sachapụrụ, kwụgidere ya ka ọ kọọ. Mgbe mmiri ozuzo na-akpọnwụ kpamkpam, were ígwè Naanị gbaa ya ọkụ. Ọ bụrụ na ị ga-edowe akwa mmiri ozuzo ahụ, ị ​​ga-ahapụrịrị akwa ndị a ka ha kọọ tupu ha apịaji. Nke a bụ iji gbochie kemịkal kemịkal nke waxy bekee na akwa mmiri ozuzo n'ihi mmiri, nke ga-eme ka mmiri ozuzo na-ama jijiji.
3. Plastic film mmiri ozuzo
Ọ bụrụ na akwa mmiri ozuzo gị bụ ihe nkiri rọba na-eme ka mmiri kpuchie, mgbe mmiri ozuzo ahụ na-agba mmiri, ị ga-ehichapụ mmiri ahụ na mmiri ozuzo ozugbo na akwa nkụ, ma ọ bụ buru akwa mmiri ahụ gaa ebe dị jụụ ma kpọọ nkụ.
A gaghị ekpughe uwe ojii mmiri ozuzo na-acha anyanwụ, ma ya fọdụkwa ime ya n’ọkụ. Ọ bụrụ na akwa mmiri ozuzo gị agbakọtara na enweghị ike iji iron mee ya, ị nwere ike tinye mmiri ozuzo ahụ na mmiri ọkụ na 70 ruo 80 maka otu nkeji, wepụ ya wee dọba ya na tebụl dị larịị. Jiri aka gị kpughee akwa mmiri ozuzo kpamkpam. Adọkpụla akwa mmiri ozuzo siri ike iji zere nrụrụ nke mmiri ozuzo. Ọ bụrụ na ejiri rọba rọba mee ogologo oge, ọ dị mfe degummed ma ọ bụ ịgbawa. Ọ bụrụ na akwa na akwa mmiri adịghị oke oke, mgbe ahụ can nwere ike ịhọrọ idozi ya n'onwe gị.
Usoro ndozi bụ: tinye obere ihe nkiri ebe akwa mmiri ozuzo na-adọka, wee tinye otu cellophane n'elu ihe nkiri ahụ. Jirizie ígwè eletrik mee ka ọ dị ngwa ngwa ngwa ngwa ka ihe nkiri ahụ nwee ike ịrapara na oghere adọwara iji mezue mmezi ahụ. Mgbe anyị na-edozi akwa mmiri ozuzo, anyị ga-echeta otu ihe: enweghị ike ịdụ akwa mmiri mmiri na agịga. Ma ọ bụghị ya, ọ nwere ike ịkpata nnukwu nsogbu na akwa mkpuchi mmiri.